सोच बदलौं, कार्यशैली बदलौं, विकास सम्भव छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सोच बदलौं, कार्यशैली बदलौं, विकास सम्भव छ
अन्तरवार्ता, मुख्य खबर 329 views
पशुपति मुरारका निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक विकास र समृद्धिलाई सबैले अबको एक मात्र एजेण्डाका रूपमा चर्चा गर्न थालेका छन् । पछिल्ला तीनै तहका निर्वाचनमा प्रायः सबै राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयलाई समेटेको भए पनि यसका लागि सम्भावित चुनौती केके छन् ? आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र के हुन सक्दछ ? लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको नीतिगत समस्या तथा श्रम समस्याबारे वर्तमान सरकारसँग निजीक्षेत्रको के अपेक्षा छ ? यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतीक्षित राजनीतिक स्थायित्व आएको र मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको भनिँदै छ । के अब मुलुकले त्यो दिशा समातेको हो त ?
अहिले नै मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा गयो भन्ने लाग्दैन । यद्यपि नयाँ संविधानपछि हुनुपर्ने तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक पुगेको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आएको छ । विगतमा छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने सरकारको ठाउँमा जनमत र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पनि कम्तीमा ५ वर्षसम्म जाने गरी स्थिर सरकार आएको छ । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । किनभने हामीले विगत २०–२५ वर्षलाई फर्केर हेर्‍यौं भने पनि सरकार बनाउने र भत्काउनेभन्दा अर्को काम खासै हुन सकेको थिएन । सबै सरकारमा अधिकार थियो, तर देश र जनताप्रति जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यो थिएन । कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिको शिकार भएको थियो । न सरकार न त कर्मचारी कोही पनि स्थिर नहुँदा निजीक्षेत्रले सरकारबाट जुन कुरा पाउनु पर्ने हो, त्यो नपाएकै हो । उहाँहरूमा पनि अनिश्चितता थियो । आज मन्त्री बन्यो, तर त्यो पनि कहिलेसम्म हो थाहा थिएन । यो विगतको अभ्यासलाई हेर्दा अहिलेको अवस्था केही सकारात्मक भने छ । अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि हामीकहाँ लगानी गर्नुस्, हामी सहजीकरण गर्न र निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनेका छन् । कति गर्नुहुन्छ, त्यो समयले बताउला । तर, अब आर्थिक विकास र समृद्धिबाहेक अर्को विकल्प पनि त छैन । राजनीतिक मुद्दा सकिएकोले अबको सरकारलाई असफल हुने विकल्प नै छैन । गरेर देखाउनै पर्छ । हेरौं, उहाँहरू यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ । जहाँसम्म निजीक्षेत्रको कुरा छ, हामी त सधैं यसैको पक्षमा छौं । वातावरण बनाउनोस्, हामी लगानी गर्न तयार छौं, भनिरहेकै छौं नि ।
यो सरकारलाई असफल हुने विकल्प छैन त भन्नु भयो । तर पात्र त घुमिफिरी उनै हुन्, निजीक्षेत्र कत्तिको विश्वस्त छ ?
भन्न त उनीहरूले पहिलेदेखि नै नभनेका होइनन्, तर हिजो जस्तो आज त छैन । हिजोका दिनमा राजनीतिक सङ्क्रमणलाई देखाएर यो गर्न खोजेको यसकारण भएन भनेर भनिदिए पुग्थ्यो, तर अब बहानाबाजी त चल्दैन । अहिले दुई तिहाइभन्दा बढीको जनमत पाएको सरकार छ । निजीक्षेत्रलाई केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले ‘यो सरकार या त सफल हुन्छ या त असफल’ तर हामीलाई असफल हुने विकल्प छैन भन्नु भएको थियो । त्यसकारण पनि अहिले विश्वास गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो चाहना पनि सरकार सफल नै बनोस् भन्ने हो । आर्थिक विकासको मुद्दामा निजीक्षेत्र सधैं सहयोगी र सकारात्मक नै छ । तर भाषणमा वा घोषणापत्रमा भने जस्तो गरी त समृद्धि आउँदैन, सरकारले पहिले आधारभूत कुराहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
सरकारले पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू केके हुन् त ?
नीतिगत सुधार, लगानीको वातावरण, रोजगारी सृजना, राजस्व सङ्कलन नगरी विकास त्यसै आउँदैन । अहिले पनि नेपाली श्रम बजारमा ४–५ लाख नयाँ जनशक्ति रोजगारीका लागि आउने गर्छन्, तर हामीले तिनीहरूलाई रोजगारी दिन सकिरहेका छैनौं । हामीले कति दिनसम्म आयात गरेर मात्र खाने ? निर्यात गर्न सक्दैनौं भने कम्तीमा आन्तरिक खपतको लागि त आफै उत्पादन गर्न सक्नु प¥यो । ठूला उद्योगको पनि कुरा छोडौं । कम्तीमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बन्द गरौं, त्यसमा त आत्मनिर्भर बनौं । आज खाद्यान्नदेखि तरकारी सबै आयात गरेका छौं । त्यसैले कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्नु पर्‍यो । जसले स्वदेशमा नै गरेको छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति बन्नु पर्‍यो । जसले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकोस् । उद्योगको विकासको लागि वातावरण बनाउनु प¥यो । जबसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं । तबसम्म अरू कुरा आउँदैन । कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू केके हुन्, ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर पहिले त्यसमा लाग्नु पर्‍यो । हाम्रो करिब ३ करोडको जनसङ्ख्या कम होइन । कतिपय युरोपका देशमा भन्दा हाम्रोमा जनसङ्ख्या बढी छ । यो आफैमा बजार हो । नसक्ने कुराहरू त आयात गर्नै पर्छ, अर्को विकल्प छैन । अर्को कुरा काममा सहजता, सरलीकरण आवश्यक छ । एउटा उद्योग दर्ताको लागि महिनौं लाग्छ, पेश गरेको फाइल खोज्दा भेटिँदैन । देख्दा सुन्दा सामान्य लाग्ने तर आचरण र व्यवहार, प्रवृत्तिगत कुराहरूको सुधार पनि सँगसँगै हुन जरुरी छ ।
नीतिगत सुधार र कानून कार्यान्वयनको विषय निजीक्षेत्रको सदाबहार माग जस्तै बनेको छ । निजीक्षेत्रका लागि कुनकुन कानूनहरू बाधक छन् ?
पहिलो कुरा हामीकहाँ निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण नै दोषपूर्ण छ । उद्योगी तथा व्यापारीलाई नाफा कमाउने वर्ग, नाफाखोर भनेर भनिन्छ । हो हामी पक्कै नाफा कमाउँछौं, नाफाकै लागि काम गर्छौं । काम गर्दा प्रतिफल खोज्नु के अपराध हो ? राजनीतिमा लागेको जोसुकैलाई पनि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा, चाहना त हुन्छ नि । सबै बन्न नसक्लान् तर आकांक्षा त सबैमा हुन्छ नि । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मान्छे सचिव मुख्यसचिव हुन्छु भनेर आकांक्षा त राखेको हुन्छ नि । त्यसरी नै उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि आफ्नो उद्योग व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै नेपालकै सफल र ठूलो उद्योगी व्यवसायी बनूँ भने चाहना हुन्छ । नाफा कमाउनु गलत पनि होइन । यसले उद्यमी तथा व्यवसायीप्रति सरकारी मानसिकता झल्काउँछ । पहिलो कुरा नेतादेखि कर्मचारीसम्ममा यो मानसिकता परिवर्तन हुन आवश्यक छ । दोस्रो नीतिगत सुधारको कुरा, हामीकहाँ २०४६ सालपछि कतिओटा संविधान परिवर्तन भइसके तर ३०–३५ वर्ष पहिलेका ऐन, नियम कानुनहरू भने यथावत् छन् । देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुने, संविधान परिवर्तन हुने तर देशलाई आवश्यक पर्ने विकास निर्माणलाई सहज बनाउने कानून परिवर्तनको आवश्यकता नहुने ? देशको विकास गर्ने भनेकै निजीक्षेत्रले हो । एउटा उद्योगीले एउटा उद्योग लगाउँछु भन्यो भने उसले कति ठाउँमा फाइल बोकेर कति महीना कुद्नु पर्छ, हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ । नीतिगत समस्याहरू यथावत् नै छन् । तिनको सुधार आवश्यक छ । भनेर मात्र भएन, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन खोजेको हो हामीले । बरू सरकारलाई हाम्रो तर्फबाट के सहयोग चाहिन्छ, हामी दिन तयार छौं भनेकै छौं ।
यो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गराउन सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
पहिले सरकारले उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्म सहजीकरण गरिदिनु पर्‍यो । अहिले उद्योगका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै गाह्रो छ । कुन जमानाको १० बिगाहाको हदबन्दी कायमै छ । १० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भए के गर्ने ? या त राज्यले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा देओस् । यसमा संशोधन आवश्यक छैन ? उद्योग चलाउनुभन्दा पहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय धाउँदैमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ । उद्योग स्थापना गरेर पो कर लिने हो । पहिलेदेखि नै कसरी बढी कर लिन सकिन्छ भन्ने धारणा र नीति परिवर्तन जरुरी छ । उद्योगहरूलाई कर उठाउने ठाउँ मात्र बनाउनु भएन । अर्को कुरा उद्योग सञ्चालन गर्दा एकद्वार नीति ल्याउनु पर्‍यो । फाइल बोकेर १० ठाउँ दौडिनु पर्छ । सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन । करको कुनै समस्या आयो भने ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र मुद्दामा जानु पर्ने प्रावधान छ । अनि को आउँछ, तपाईंकोमा लगानी गर्न ? हाम्रा नियम कानून सरकारी कर्मचारी मात्र इमानदार अरू सबै बेइमान, चोर भन्ने अवधारणाबाट आएका छन् । यही प्रवृत्तिको कारण यदि कुनै सरकारी अधिकृतले चाह्यो मात्रै भने पनि कुनै पनि उद्योग ठाउँका ठाउँ बन्द हुन्छन् । कुनै उद्योगले ५० वर्षमा कमाएको गुडविल एकै दिनमा सकिन्छ । उसले सफाइको मौका पनि पाउँदैन । कम्तीमा सफाइको मौका त पाउनु प¥यो नि, यो न्याय हो त ? यो डर सबै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सधैं भइरहन्छ । त्यसैले अझै पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनेकै छैन । यस्तो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई त हामीकहाँ मात्र किन आउनु पर्‍यो ? हरेक देशले रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेका छन् । हामीकहाँ आएर सरकारी प्रक्रिया र झण्झट देखेपछि ऊ फर्केर कुरा गर्न पनि आउँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको देशकै मार्केटिङ गर्नु हो । त्यो अवस्थाको लागि हामी तयार छौं त ? अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको यतिका समय बितिसक्यो, अहिलेसम्म सम्मेलनको समयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कति प्रतिशत लगानी नेपाल आयो त ? त्यो त हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ । उद्योगमैत्री वातावरणविना न राष्ट्रिय न त अन्तरराष्ट्रिय लगानी नै बढ्ने देखिन्छ ।
कतिपय नयाँ ऐनहरू आउनुको साथै केही ऐन, नियमहरू परिवर्तन पनि त भएका छन् । यसलाई पनि त सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ होला नि ?
सधैं आशङ्का मात्रै गरेर त भएन । आशावादी त हुनै पर्‍यो । अहिलेको सरकार सुविधाजनक बहुमतमा छ, शक्तिशाली छ । भएका ऐननियमको कार्यान्वयन होस् या संशोधनको कुरा होस् । अहिलेको सरकारले चाह्यो भने अहिले नीतिगत सुधारका लागि कुनै समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले पनि कानून नै नभएको कहाँ हो र । तर, भएका कानूनको कार्यान्वयन पनि हुनु पर्‍यो । अब हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामी आशावादी छौं ।
यसो भनिरहँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको पनि राष्ट्र, जनता र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पनि होला नि ? नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा गरेका छन् त ?
सबै असल छन्, सबैले राम्रो गरेका छन् भन्ने हाम्रो पनि मनसाय होइन । गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्छ । यसमा हाम्रो पनि भन्नु केही छैन । तर, सुधार नभएको होइन । खुला बजारमा यदि कुनै उत्पादकले आफ्नो ब्राण्डमा तलमाथि गर्छ भने उसैलाई नोक्सान हुन्छ । आजका दिनमा बजारमा आएका हरेक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा छ । गलत वस्तु उपभोक्तासँग पुग्यो भने एकपटकको लागि त उपभोक्ताले उपभोग गर्ला तर, त्यसपछि सधैं एकै अवस्था नहोला नि । देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको देश, जनता र उपभोक्ताप्रति पक्कै पनि ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्‍यो भने त राम्रो गर्नेलाई निरुत्साहित बनाउँछ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदर परिवर्तनले समस्यामा परेका छन् । यसले लगानीकर्ता तथा आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कुनै पनि उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्दा पूँजीको निश्चित योजना बनाएर अगाडि आएको हुन्छ । कसैले पनि बैङ्कको बचत खतामा पैसा राखेर उद्योगमा लगानी गर्न आउँदैन । कतिपय आफ्नै रकम होला कतिपय बैङ्कको लगानी होला । ब्याजको हिसाब गरिएको हुन्छ । तर हामीकहाँ छिनछिनमा ब्याज परिवर्तन हुन्छ । ५ प्रतिशतको तलमाथि त हामीकहाँ सामान्य जस्तै भइसक्यो । अहिले कुनै पनि बैङ्कले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने अवस्था छैन ।
यसको असर त लगानीमा परिहाल्यो नि । देशलाई आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परिरहेको हुन्छ । त्यो अनिश्चितताले सधैं व्यवसायीलाई पिरोलिरहेको हुन्छ । लगानीको अनिश्चितताले उद्योगीहरू सधैं फायर फाइटर जस्तै अवस्थामा बसेर काम गर्नु परेको छ । तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय वा सरकारले कुन विधि र पद्धतिबाट गर्ने हो, गर्नु पर्‍यो । सरकारले आफ्नो खर्च बढाउनु पर्‍यो । तरलताको अवस्था वा ब्याजदर घटबड हुँदा जुन निकायले जसरी संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने हो, त्यो अभाव सधैं देखिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि प्रायः सबै मन्त्रीहरूले अब विकासका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य आवश्क छ भनेर भनिरहनु भएको छ । धेरैजसो विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअनुरूप काम गर्ने भनिएको छ । निजीक्षेत्र सरकारसँग कस्तो सहकार्य चाहन्छ ?
कतिपय आयोजनामा (पीपीपी) मोडल ठीकै होला । तर, सहकार्यभन्दा पनि निजीक्षेत्रलाई सरकारले विश्वास गर्नु पर्‍यो । हामी काम गर्न सक्षम छौं । निजीक्षेत्रलाई सुन्नु पर्‍यो । केही वर्ष पहिले ऊर्जाको विकासको निजीक्षेत्रको कुरा गर्दा २/३ मेगावाटको कुरा गर्थ्यौं । तर, सय मेगावाटमाथिका हाइड्रोपावर निजीक्षेत्रले बनाएको छ । ठूल्ठूला सिमेण्टलगायतका उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । बैङ्किङ, बीमा, एयरलाइन्स, अस्पताल, पर्यटन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले अर्बौंको लगानी गरेको छ । केही पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रका काम राज्यले गर्ने हो । अरू क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सोच बदलौं, कार्यशैली बदलौं, आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ ।